2011-2019 Audi A1 / Audi S3 / Audi Q3 Ngosipụta Gosiputa Ngosipụta ihuenyo GPS (6.5-Inch) 2011-2019 Audi A1 / Audi S3 / Audi Q3 Ntughari Ngosiputa Onye Nlekọta Onyinye Mgborogwu GPS (6.5-Inch) - LFOTPP
Home ngwaahịa 2011-2019 Audi A1 / Audi S3 / Audi Q3 Ngosipụta Gosiputa Ngosipụta ihuenyo GPS (6.5-Inch)
2011-2019 Audi A1 / Audi S3 / Audi Q3 Ngosipụta Gosiputa Ngosipụta ihuenyo GPS (6.5-Inch)
Ị Na-ekpuchi ihuenyo ihuenyo.
˚ 9H Screen Screen: Chebe ihuenyo gị site na Icha, Ngbawa na Debris;
◯ Ibelata Ike Ike Gị;
⑷ Na-egbochi mkpịsị aka akara ihuenyo ahụ;
⑸ Chebe ihuenyo gị site na mmanụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mma.
⑹ Mee Ka Ndụ Gị Dị Mma, Nọgidenụ Na-ahụ Ụtọ Gị n'anya Na-ehicha Oge Nile.
Nyocha Ugbu a: lfotpp@gmail.com
Kedu ihe mere ị ga - eji dị mkpa iji wụnye ihe nchebe ihuenyo mkpuchi Audi?
2. Debe ihe nkiri a na-ekpo ọkụ na ihe ngosi iji gosi na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị.
4. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, tinye ihe nkiri iko a na-ekpo ọkụ megide ngosipụta site na n'ihu ngosi ahụ ga-arụ ọrụ.
EKWASI NKWUKWU - Mgbe Ijere Ozi
LFOTPP bụ ọkachamara ọkachamara na mmepe, mmepụta, mmepụta na ahịa.
Anyị na-esi ọnwụ na onye ahịa ahụ, ọ bụrụhaala na anyị na-eme ya, anyị ga-enye gị mmesi obi ike dị mma.
Ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndị ahịa mkpa nke ọsọ na àgwà.
Anyị na-ejikọta ọtụtụ afọ ọkachamara ọkachamara, ụlọ ọrụ ahụ anọgidewo na-agbaso "iguzosi ike n'ezi ihe, mma, kwụsie ike, ihe ọhụrụ" nkà ihe ọmụma azụmahịa, ịnụ ọkụ n'obi iji nye ndị ahịa anyị àgwà ka mma, ụgwọ ndị ka mma, ọrụ na-enye afọ ojuju karị.
Anyị ji ezi obi na-atụ anya isoro gị rụọ ọrụ!
2019 Audi A6 / A7 Mmiri Igwe Mmiri Na-achịkwa Ikuku Nchekwa Igwe
LFOTPP na-achụso mma maka Audi akụkụ, Ọhụụ anyị na-eme ka ndị mmadụ dịkwuo mma. LFOTPP ụgbọ ...
2019 Audi A8 Ngosipụta ihuenyo PET Nkiri Pịkụl [4 iberibe]
1. Ezi nghota: Ntughari ederede, nke mere na echebela igodo igodo gi, mana o adighi emetuta onu ...
Audi A6 / Audi A7 Ngosipụta Onye Nchedo & Ikuku Ngwá Nche (Otu Set)